DAAWO:-Xisbiga Himilo Qaran oo Dacwad ka Gudbiyey Xukuumadda Soomaaliya iyo Sheikh Shariif oo ka hadlay |
DAAWO:-Xisbiga Himilo Qaran oo Dacwad ka Gudbiyey Xukuumadda Soomaaliya iyo Sheikh Shariif oo ka hadlay
Xisbiga Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed ayaa maaanta u gudbiyey Maxkamadda Sare ee dalka taasoo ku saabsaneyd xayiraadii Garoonka Muqdisho.
Sidoo kale Shiikh Shariif ayaa sheegay inay dacwadaas Maxkamadda Sare u gudbiyeen iyagoo ilaalinayo shuruucda dalka u taalo, wuxuuna sheegay in is hortaaggii lagu sameeyey uu ahaa mid sharci darro ah.
“ Iyada oo laga duulayo dhowrista iyo ilaalinta shuruucda dalka ayaan si rasmi ah dacwad ugu gudbinnay maxkamadda sare ee dalka taasi oo ku saabsan is hortaaggii sharci darrada ahaa ee xukuumaddu ay ku sameysey xubnihii xisbiga Himilo Qaran ee aan hogaaminayay kuna socdey Kismaayo xarunta KMG ee Jubaland”.
Shiikh Shariif ayaa sheegay inaysan jirin cid ka sareysa Sharciga isla markaasna ay maxkamada Sare ka sugayaan cadaalad, wuxuuna xusay inay dacwadda si gaar ah uga gudbiyeen laanta fulinta ee Dowladda Soomaaliya.
Shariif ayaa ugu dambeyn sheegay inay dacwadaas Maanta usoo bandhigeen Saxaafadda uuna u akhriyey xoghayaha arrimaha dibadda ee xisbiga Himilo Qaran Ilyaas Cali Xasan.
“ Shir jaraa’id oo aan ku qabannay xarunta xisbiga ayaan warbaahintana kula wadaagnay, iyada oo uu u aqriyey nuqulka dacwadda aan gudbinnay xoghayaha arrimaha dibadda ee xisbiga Himilo Qaran Senator Ilyaas Cali Xasan”.